2 Samuel 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
7 O wee ruo mgbe eze bi n’ụlọ ya,+ mgbe Jehova mekwara ka o zuoro ndị iro niile gbara ya gburugburu ike,+
2 eze sịrị Netan+ onye amụma: “Lee, m bi n’ụlọ e ji osisi sida+ wuo ma igbe ezi Chineke dọrọ n’etiti ákwà ụlọikwuu.”+
3 Netan wee gwa eze, sị: “Ihe ọ bụla dị gị n’obi—gaa mee ya,+ n’ihi na Jehova nọnyeere gị.”
4 O wee ruo n’abalị ahụ na okwu+ Jehova ruru Netan ntị, sị:
5 “Gaa gwa ohu m Devid, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ọ̀ bụ gị ga-ewuru m ụlọ m ga-ebi?+
6 N’ihi na ebitụbeghị m n’ụlọ malite n’ụbọchị m kpọpụtara ụmụ Izrel n’Ijipt ruo taa,+ kama anọ m na-ejegharị+ n’ụlọ ntu+ nakwa n’ụlọikwuu.+
7 N’oge niile m gagharịrị n’etiti ụmụ Izrel,+ ọ̀ dị okwu m gwara otu n’ime ebo Izrel+ nke m nyere iwu ịzụ ndị m Izrel dị ka atụrụ, sị, ‘Gịnị mere na unu ewughịrị m ụlọ e ji osisi sida wuo?’”’
8 Nke a bụ ihe ị ga-agwa ohu m Devid, ‘Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: “Mụ onwe m si n’ala ịta ahịhịa, n’ebe ị na-edugharị ìgwè ewu na atụrụ,+ kpọrọ gị ka ị bụrụ onye ndú+ nke ndị m Izrel.
9 M ga-anọnyekwara gị n’ebe ọ bụla ị na-aga,+ m ga-ebipụkwa ndị iro gị niile n’ihu gị;+ m ga-emekwara gị oké aha,+ dị ka aha ndị ukwu bi n’ụwa.
10 M ga-enye ndị m Izrel otu ebe,+ kụọkwa+ ha dị ka mkpụrụ, ha ga-ebikwa n’ebe ha nọ, a gakwaghị eme ka ha maa jijiji; ụmụ ajọ omume agaghị emekpa ha ahụ́ ọzọ dị ka ha mere na mbụ,+
11 ọbụna malite n’ụbọchị m mere ka ndị ikpe+ bụrụ ndị isi nke ndị m Izrel; m ga-emekwa ka i zuoro ndị iro gị niile ike.+
“‘“Jehova agwawokwa gị na Jehova ga-ewuru gị ụlọ.+
12 Mgbe ụbọchị gị ga-ezu,+ ị ga-esoro nna nna gị hà dinaa,+ mgbe ahụ, m ga-eme ka mkpụrụ gị, nke ga-esi n’ahụ́ gị pụta, bilie mgbe ị nwụsịrị; m ga-emekwa ka alaeze ya guzosie ike.+
13 Ọ bụ ya ga-ewuru aha m ụlọ,+ m ga-emekwa ka ocheeze nke alaeze ya guzosie ike ruo mgbe ebighị ebi.+
14 Mụ onwe m ga-abụ nna ya,+ ya onwe ya ga-abụ nwa m.+ Mgbe o mere ihe ọjọọ, m ga-eji ụtarị+ ụmụ mmadụ na apịpịa ụmụ Adam dọọ ya aka ná ntị.
15 Ma obiọma* m agaghị esi n’ebe ọ nọ pụọ dị ka m wepụrụ ya n’ebe Sọl nọ,+ bụ́ onye m wepụrụ n’ihi gị.
16 Ụlọ gị na alaeze gị ga-eguzosi ike n’ihu gị ruo mgbe ebighị ebi; a ga-emekwa ka ocheeze gị guzosie ike ruo mgbe ebighị ebi.”’”+
17 Netan wee gwa Devid okwu dị ka okwu ndị a niile si dị nakwa dị ka ọhụụ a dum si dị.+
18 Eze Devid wee bata nọdụ ala n’ihu Jehova wee sị: “Ònye ka m bụ,+ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova? Gịnịkwa ka ụlọ m bụ mere i ji meere m ihe a niile?
19 Dị ka à ga-asị na nke a bụ ihe nta n’anya gị, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, ị na-ekwukwa ihe ga-eme mgbe dị anya n’ọdịnihu banyere ụlọ ohu gị; nke a bụkwa iwu e nyere ụmụ mmadụ,+ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova.+
20 Gịnị ọzọ ka Devid ga-agwa gị, ebe gị onwe gị maara ohu gị nke ọma,+ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova?
21 N’ihi okwu+ gị nakwa dị ka o si dị gị mma n’obi,+ i mewo oké ihe ndị a niile iji mee ka ohu gị mara ha.+
22 Ọ bụ ya mere i ji dị ukwuu n’ezie,+ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova; n’ihi na ọ dịghị onye ọzọ dị ka gị,+ ọ dịghịkwa Chineke dịnụ ma e wezụga gị+ n’ime chi niile anyị jiworo ntị anyị nụ.
23 Oleekwa mba dị n’ụwa nke dị ka ndị gị Izrel,+ bụ́ ndị Chineke gara gbapụtara onwe ya ka ha bụrụ ndị ya,+ iji meere onwe ya aha+ nakwa iji meere ha oké ihe na ihe dị egwu+—iji chụpụ mba dị iche iche na chi ha n’ihi ndị gị, bụ́ ndị i si n’Ijipt gbapụtara+ onwe gị?
24 I wee mee ka ndị gị Izrel+ guzosiere gị ike dị ka ndị gị ruo mgbe a na-akaghị aka; gị onwe gị kwa, Jehova, abụrụwo Chineke ha.+
25 “Ugbu a, Jehova Chineke, mezuo ihe i kwuru banyere ohu gị nakwa banyere ụlọ ya ruo mgbe ebighị ebi, mee nnọọ dị ka i kwuru.+
26 Ka aha nke gị dị ukwuu ruo mgbe ebighị ebi,+ ka ndị mmadụ wee sị, ‘Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ Chineke Izrel,’+ ka ụlọ ohu gị Devid guzosiekwa ike n’ihu gị.+
27 N’ihi na gị onwe gị, Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ́ Chineke Izrel, ekpugheworo ohu gị, sị, ‘M ga-ewuru gị ụlọ.’+ Ọ bụ ya mere ohu gị ji nwee obi ike ikpeku gị ekpere a.+
28 Ugbu a, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, ọ bụ gị bụ ezi Chineke; ka okwu gị bụrụkwa eziokwu,+ ebe i kwere ohu gị nkwa ihe ọma a.+
29 Biko, hụ na ị gọziri+ ụlọ ohu gị ka o wee dịruo mgbe ebighị ebi n’ihu gị;+ n’ihi na gị onwe gị, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, ekwewo nkwa, n’ihi ngọzi gị, ka ụlọ ohu gị bụrụ ihe a gọziri agọzi ruo mgbe ebighị ebi.”+
^ 2Sa 7:15*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D10%26Chapter%3D7%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl